သင်၏ CMO ကိုစျေးကွက်ရှာဖွေရေးနည်းပညာတာဝန်ယူခြင်းကအကျိုးဖြစ်စေသည်။ | Martech Zone
သင်၏ CMO ကိုစျေးကွက်ရှာဖွေရေးနည်းပညာတာဝန်ယူခြင်းကအကျိုးဖြစ်စေသည်။
ဗုဒ္ဓဟူးနေ့, အောက်တိုဘာလ 22, 2014 ဗုဒ္ဓဟူးနေ့, အောက်တိုဘာလ 22, 2014 Douglas Karr
A Chief Marketing Officer (CMO) ကောင်စီမှလေ့လာမှုအသစ် နှင့် Tealium စီးပွားရေးနှင့်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးစွမ်းဆောင်ရည်တိုးတက်မှုများသည်ဒစ်ဂျစ်တယ်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးနည်းပညာများကိုစီမံခန့်ခွဲခြင်းနှင့်သုံးစွဲသူထိတွေ့အမှတ်များပြားခြင်းမှရရှိသောအချက်အလက်များကိုပေါင်းစပ်ခြင်းအတွက်တရားဝင်လမ်းပြမြေပုံရှိခြင်းနှင့်တိုက်ရိုက်ဆက်စပ်နေသည်ဟုပြသသည်။
ခေါင်းစဉ် ဘယ်လောက်ကောင်းကောင်းညီညွတ်သလဲဆိုတာကို Quantifyအသစ်သောစျေးကွက်ရှာဖွေရေးကုမ္ပဏီများသည်ဒစ်ဂျစ်တယ်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးနည်းပညာမဟာဗျူဟာများကိုတီထွင်ခြင်းနှင့်သုံးစွဲသူအချက်အလက်အရင်းအမြစ်များကိုမြှင့်တင်ခြင်းမှတန်ဖိုးကိုပေါင်းစပ်ခြင်းနှင့်ထုတ်ယူခြင်းအားဖြင့်အစီရင်ခံစာသစ်သည်အစီရင်ခံစာအသစ်ကိုလေ့လာထားသည်။ အမြင့်ဆုံးအချက်များအနက်လေ့လာမှုက
CMOs ၏ ၄၂ ရာခိုင်နှုန်းသည် သူတို့ရဲ့စျေးကွက်ရှာဖွေရေးနည်းပညာမဟာဗျူဟာကိုပိုင်ဆိုင်သည် လွှဲအပ်သူများထက်စီးပွားရေးအကျိုးသက်ရောက်မှုပိုများသည်။
တရားဝင်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးနည်းဗျူဟာရှိသော CMOs များ ခြုံငုံဝင်ငွေပိုမိုအထောက်အကူပြု နှင့်တန်ဖိုးကိုဖန်တီးမှု။
တရားဝင်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးနည်းပညာဗျူဟာရှိသော CMOs တစ်ဝက်ခန့်သည်တတ်နိုင်ကြသည် ပိုမိုပစ်မှတ်ထားထိရောက်သောနှင့်သက်ဆိုင်ရာဖောက်သည်ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုအောင်မြင်ရန်.
တရားဝင်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးနည်းပညာဗျူဟာရှိသော CMOs များ၏ ၃၉% ပိုမိုကောင်းမွန်သောပြန်လာမှုနှင့်တာ ၀ န်ခံမှုကိုရရှိရန် စျေးကွက်ဖြုန်း၏။
၃၀% သော CMO များသည်နည်းပညာကိုအလွန်ကောင်းမွန်စွာသို့မဟုတ်အလွန်ကောင်းမွန်စွာပေါင်းစပ်ထားသည့်သူများဖြစ်သည် မြင်သာထင်သာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတန်ဖိုးကိုမြင်လျှင်, သူတို့ထဲက 51 ရာခိုင်နှုန်းနှင့်အတူ သာ။ ကြီးမြတ်ဝင်ငွေပံ့ပိုးမှုများကိုရရှိ.
အဆိုပါ အစီရင်ခံစာအပြည့်အစုံကိုယနေ့ download ရယူနိုင်ပါသည် $ 99 အဘို့။ တစ် ဦး က complimentary အလုပ်အမှုဆောင်အကျဉ်းချုပ်လည်းရင်းမြစ်နိုင်ပါတယ်။
Tags: စီးပွားရေးတန်ဖိုးcmo ကောင်စီဖောက်သည်ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုဒီဂျစ်တယ်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးနည်းပညာစျေးကွက်ဝင်ငွေစျေးကွက်ရှာဖွေရေးနည်းပညာစျေးကွက်ရှာဖွေရေးနည်းပညာ alignment ကိုရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအပေါ်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးနည်းပညာပြန်လာစျေးကွက်ရှာဖွေရေးနည်းပညာမဟာဗျူဟာစျေးကွက်ရှာဖွေရေးနည်းပညာရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအပေါ်ပြန်လာပါအခွန်ဝန်ကြီးဌာနဝင်ငွေပံ့ပိုးမှုများကိုရွယ်ပစ်မှတ်ထားဖောက်သည်ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုTealiumပေါင်းစည်းခြင်း
KISSmetrics သည်အလွန်ထင်ရှားသော Path Report ကိုထုတ်ပြန်ခဲ့သည်
ကမ်းတက်စာမျက်နှာအတွက်အကောင်းဆုံးအလေ့အကျင့်များ - စကားဝိုင်းများအတွက်မည်သို့အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်လုပ်ရမည်နည်း
23:2014 pm မှာအောက်တိုဘာ 10, 38
CIO vs CMO နှင့် CMTO ပိုင်ဆိုင်သောနည်းပညာသည်လေကောင်းလေလေများလေလေဖြစ်သည်။ ငါတို့၏လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းရန်လိုအပ်သောမဟာဗျူဟာကျွမ်းကျင်မှုသို့မဟုတ်နည်းပညာဗဟုသုတရှိသည့် CMO အနည်းငယ်သာရှိသည်။ သင်ညွှန်ပြသကဲ့သို့, အကြီးမားဆုံးပြissuesနာတစ်ခုမှာပေါင်းစည်းမှုဖြစ်ပါတယ်။ အခြားတစ်ခုမှာအချက်အလက်စီမံခန့်ခွဲမှုဖြစ်သည်။ ဒါ့အပြင် CMO ရဲ့စွန့်စားတီထွင်မှုနည်းပညာတွေဟာပြ/နာ၊ အခွင့်အလမ်းတွေ၊ လုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုမြေပုံရေးဆွဲခြင်း၊ ဖောက်သည်များအပေါ်သက်ရောက်မှုများ၊ ကျွမ်းကျင်သောလူအရင်းအမြစ်များမရှိခြင်းသည်ယခုအချိန်တွင်ကြီးမားသောစိန်ခေါ်မှုတစ်ရပ်ဖြစ်သည်။
CIO သည်ဤလုပ်ငန်းစဉ်မှတဆင့်တန်ဖိုးမဖြတ်နိုင်သောမိတ်ဖက်တစ်ယောက်အနေဖြင့်လုပ်ဆောင်နိုင်သည်ဟုကျွန်ုပ်ထင်သည်။ မည်သို့အောင်မြင်ရမည်ကိုအကြံပြုချက်များနှင့်လမ်းညွှန်ချက်များပေးရန် CMO နှင့်လက်တွဲလုပ်ဆောင်သည်။ ငါ့စာအုပ်ထဲမှာဒါကနယ်မြေကိစ္စမဟုတ်ဘူး။ အဆုံး၌စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအနိုင်ရရှိပြီးအခန်းကဏ္ both နှစ်ခုလုံးအကျိုးရှိမည်။
ကောင်းတဲ့ infographic နှင့်ကိန်းဂဏန်းများ!
23:2014 pm တွင်အောက်တိုဘာ 9, 55
ဘရိုင်ယန်သဘောတူပါတယ်။ ငါကွဲပြားတဲ့နေရာမှာ CMO မှာဒီနည်းပညာဆိုင်ရာဗဟုသုတရှိဖို့လိုတယ်။ ဥပမာအားဖြင့်ဖြန့်ဖြူးရေးမန်နေဂျာတစ် ဦး သည်ထရပ်ကားတစ်စီးအားမည်သို့ပြန်လည်ပြုပြင်ရမည်ကိုနားမလည်ရန်လိုအပ်သည်။ သို့သော်သူသည်ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးလုပ်ငန်းများကိုလုပ်ဆောင်နိုင်ပြီးလုပ်ငန်းပြီးမြောက်ရန်အတွက်သင့်တော်သော ၀ န်ထမ်းများသေချာအောင်လုပ်နိုင်သည်။ ဒီမှာကျနော့်အမြင်မှာအဓိကအချက်က CIO ရဲ့အာရုံစိုက်မှုနဲ့ရည်မှန်းချက်တွေက CMO နဲ့အမြဲတမ်းမကိုက်ညီတာပါပဲ ကျွန်တော့်အတွေ့အကြုံအရကျွန်တော်နှင့်အတူအလုပ်လုပ်ခဲ့သောနည်းပညာရှင်များသည်သူတို့၏ရည်မှန်းချက်သည်တည်ငြိမ်မှုနှင့်လုံခြုံမှုရှိသောကြောင့်အဖွဲ့အစည်းများစွာတွင်တိုးတက်မှုများကိုအေးခဲစေခဲ့သည်။ ၎င်းတို့သည်အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုအတွက်အရေးကြီးသော်လည်းကြီးထွားမှုစျေးကွက်ရှာဖွေရေးနှင့်အရောင်းထူးချွန်မှုများကိုရှာဖွေစဉ်၎င်းတို့အောင်မြင်နိုင်သည်။ သင်၏နည်းပညာအဖွဲ့သည်မဟုတ်သည်ဖြစ်စေမကြာခဏမေးခွန်းထုတ်တတ်သည် လုပ်နိုင် အသင်း ... ဒါမှမဟုတ်က မလုပ်နိုင်ဘူး အသင်းအဖွဲ့။ ၎င်းကိုပြင်ဆင်ရန်အခြားနည်းလမ်းတစ်ခုမှာ CMO သည် CIO ၏ဖောက်သည်ဖြစ်ပြီး CIO ၏အောင်မြင်မှုအဆင့်သတ်မှတ်ချက်တွင်ပါ ၀ င်သည့်သင်၏အဖွဲ့အစည်းတွင်ဖောက်သည်ဝန်ဆောင်မှုကို ဦး တည်သည့်အဆင့်ဆင့်ရှိရန်ဖြစ်သည်။